कालिकोटबाट ४१ करोड बजेट फ्रिज
जिल्लाको विकास निर्माणमा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरि आएको आ.व २०७४÷०७५ को विकास बजेटमा ४१ करोड २० लाख ७२ हजार बजेट फ्रिज भएको छ । स्थानीय तहको सिकाईको बर्ष भएका कारणले बजेटको खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको हो ।
सिद्धि गणेशको मुनाफा २४ लाख
गोरखा सदरमुकाममो सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक बर्षमा २४ लाख १७ हजार एकसय सात रुपैँया १९ पैसा खुद मुनाफा गरेको छ । सहकारीको आठौँ साधारण सभा पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका अध्यक्ष अच्यूतलाल श्रेष्ठले सहकारीले गत आर्थिक बर्ष सो रकम खुद मुनाफा कमाएको जानकारी दिए ।
तरकारीको मूल्य महँगियो
दुई सातायता हरियो तरकारीको मूल्य झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । वर्षातको समयमा कम उत्पादन भई लागत महँगो परेकाले मूल्य वृद्धि भएको हो । खरिद मूल्य बढेर आएकाले अधिकांश तरकारीको मूल्य बढ्न गएको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ ।
कर बढाउन र खर्च गर्न हतार नगर्नुस्
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमात्र भएकाले पहिलो वर्षमै कर वृद्धि र खर्च गर्नमा नहतारिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गरेका हुन् ।
वैदेशिक सहायता एकीकृत कोषबाट मात्रै
सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म वैदेशिक सहायताका नाउँमा ठूलो रकम प्राप्त भए पनि यसको उत्पादकत्व भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले यसको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
६६ करोड विकास बजेट फिर्ता
ओखलढुंगाका विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार २३० रुपैयाँ विकास बजेट फिर्ता भएको छ । पुँजीगततर्फको जम्मा खुद बजेट २ अर्ब १२ करोड ३८ लाख ६७ हजार मध्ये १ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख ११ हजार ७७० मात्र खर्च भएको छ ।
भक्तपुर उपमहानगरपालिकाको पर्यटन शुल्कबाट २४ करोड आम्दानी
भक्तपुर उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पर्यटन शुल्कबाट २४ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष भक्तपुर अवलोकनका लागि आएका २ लाख २७ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ विदेशी पर्यटकबाट नगरपालिकाले सो रकम आम्दानी गरेको हो ।
विश्व बैंकको सहयोग दोब्बरः अर्थमन्त्री
विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराइरहेको सहायता रकममा दोब्बरले बढाउने भएको छ । सन् २०१९ देखि बैंकले नेपाललाई दिने सहयोग चालू वर्षको भन्दा दोब्बर ले बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरको सहयोगको आवश्यकता
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
निकासी कर नलिन अदालतको अन्तरिम आदेश
दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको निकासी कर नउठाउन अदालतको आदेशपछि अन्योल छाएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले जिल्ला समन्वय समिति इलामका नाममा जिल्ला निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश गरेपछि अन्योल छाएको हो ।
बूढीगण्डकीका लागि तीन वर्षमा इन्धनबाट २२ अर्ब संकलन
तीन वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले ३ वर्षको अवधिमा सो रकम संकलन गरेको हो ।
धनुषामा १८ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज
धनुषामा विनियोजित बजेटमध्ये १८ करोड २१ लाख ३६ हजार १६३ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । गत आव ०७४÷७५ मा चालू खर्चतर्फ विनियोजित कुल बजेट ११ अर्ब १६ करोड ६१ लाख ४५ हजार ९२७ रुपैयाँमा १० अर्ब ९८ करोड ४० लाख ९ हजार ७६४ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकको चेतावनी
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउन नमान्ने बैंकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) २ प्रतिशतले घटाएसँगै बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै बैंकहरूले अब कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने र घटाउन नमान्नेमाथि कठोररूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको हो ।
ट्राफिक कारवाहीबाट ५१ लाख राजश्व
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीसाधनका चालकलाई कारवाही गरी रु ५१ लाख ४२ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
इन्धनबाट सरकारलाई ५५ अर्ब राजस्व
नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गरेर सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।